Zvese nezve iyo 3D Kubata kweiyo nyowani iPhone, usarasikirwa nayo | IPhone nhau
Luis Padilla | | iOS 9, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Iyo nyowani iPhone 6s uye 6s Plus inosvika ine dhizaini ingango fanika kune yapfuura modhi asi iine chitsva icho «chinoshandura zvese». Iyo nyowani skrini ine kugona kusiyanisa iro simba raunodzvanya naro rinotendera iyo 3D Touch, nzira nyowani yekudyidzana neIOS inonyatso shandura nzira yatinoshandisa maapplication.
Mifananidzo pane iyo yekuvhara skrini, mapfupi ekushandisa mashandiro kubva kubhodhi, uchishandisa iyo keyboard senge trackpad ... Zvese izvi uye zvimwe zvakawanda ndizvo izvi zvitsva tekinoroji inosanganisirwa mu iPhone 6s yatichazotaura newe zvakadzama.
1 3D Touch inoshanda sei?
2 Mapfupi pane ekutanga
3 Peek uye Pop
4 Mifananidzo pane iyo yekuvhara skrini
5 Chiito multitasking
6 Yako keyboard yave ikozvino Trackpad
7 Uye uku kungori kutanga
3D Touch inoshanda sei?
Muvhidhiyo yauinayo pamusoro pemitsara iyi unogona kuona pfupiso yekuti 3D Kubata kunoshanda sei paiyo iPhone 6s, mikana yayo uye nzira yatinofanira kudyidzana nayo neiyi tekinoroji iyo, zvishoma nezvishoma, iri kuramba iripo mumidziyo yeManzana .
Mapfupi pane ekutanga
Iyo nyowani 3D Kubata yakanyanya kudarika mapfupi kubva kubhodhi. Zvichida ndicho chinonyanya kushamisa, chii chinogona kunyanya kukwezva kutariswa kwevashandisi, asi ini ndinofunga hazvisi izvo zvinonyanya kufadza basa reiyi nyowani tekinoroji. Asi nekuti ndiyo inonyanya kuvhundutsa vagadziri vakurumidza kubheja pazviri, uye pane atove akawanda mafomu anopa aya mapfupi kuburikidza ne3D Kubata. Bata iyo icon yekushandisa kuti uvhure semazuva ese, tinya zvinyoro nyoro kuti uwane iwo mapfupi ayo anotendera iwe kuti utumire pikicha kuTwitter kana kutara chikamu cheyako akada nhevedzano sezvinoonekwa.
Peek uye Pop
Apple yakatiratidzawo pakuratidzwa kwePhones nyowani mashandiro "Peek" uye "Pop".. Dhinda zvinyoronyoro pane chinongedzo kuti utarise peji rewebhu rairi, kana pinda zvakanyanya kuivhura zvakananga muSafari. Izvo zvinoenda kumafoto neMail, iyo iOS tsamba app. Iyo yekupedzisira yakagadziriswa patsva nekuda kwemabasa matsva aya uye zvakare inotora nzvimbo ine rukudzo iyo yaisingafanirwe kunge yakarasika.
Mifananidzo pane iyo yekuvhara skrini
Iwe unoda kuisa iyo animation pane yako Lockscreen? Zvakanaka, iwe hauchade chero Cydia tweak iyo inodhira bhatiri reako anodiwa iPhone. Tora pikicha uine yako nyowani iPhone 6s kana 6s Uyezve, iyo "Live Photo" uye ishandise semberi kune yako yekukiya skrini. Paunodzvanya pachiratidziro iyo mimhanzi inotanga uye kwemasekondi mashoma iyo foto ichave yehupenyu mune yechokwadi "Harry Potter" maitiro.
Chimwe chikonzero chidiki chejerebreak: iwe unogona kuwana multitasking nekuita chiratidzo pachiratidziri. Dzvanya kumucheto wekuruboshwe kwechiratidziro uye multitasking ichavhura, ichikupa mukana kune ese maapplication awakavhura uye kune ekutanga. Pasina kudzvanya bhatani rekutanga kaviri. Zvaunoda iwe kukurumidza kuchinjira kune yapfuura kunyorera? Zvakanaka, pachinzvimbo chekushandisa uye kubatisisa margin, unofanirwa kumanikidza nekutsvedza kubva kuruboshwe uchienda kurudyi, uye mashandisiro awanga uine pachiratidziro anozovhura nekukasira pamberi pezvino.
Yako keyboard yave ikozvino Trackpad
Izvo zvakare zvinonzwisisika zvinotiyeuchidza nezve Cydia tweak: ikozvino keyboard yako inoita kunge trackpad yekukwanisa kufambisa iyo cursor pachiratidziri. Dhinda pabhodhi uye tsvedza chigunwe chako pamusoro payo, iwe uchaona kuti iyo sarure inofamba kuburikidza nerunyorwa iwe urwo pachiratidziri. Unoda here kusarudza mavara? Isa chinyoreso pamusoro pekutanga kwechinyorwa, buritsa kumanikidza pachiratidziro asi usinga mire kudzvanya, wobva wadzvanya zvakaomarara zvekare, ipapo uchazokwanisa kupururudza nekusarudza iwo mavara aunoda.
Uye uku kungori kutanga
Uye chakanakisa pane zvese ndechekuti iyo 3D Kubata ichangotanga. Pasina mubvunzo ichave tekinoroji inozoshandura iOS zvachose, uye ichine nzira refu yekuenda nemabasa matsva ayo ayo achatipa isu sevanogadzira uye Apple pachayo inoshanda pairi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Zvese nezve 3D Kubata kwePhones nyowani
Ndine urombo, kuti zvinobatsira mune dzimwe nzvimbo dzeapp ndezvechokwadi, asi zvakanyanya kwete, ndiudze rimwe ramangwana basa rinoita kuti ritaure kuti inyowani, mutsauko uripakati peyakajairika dhindaini (peek) uye pop ndeye kubvisa munwe, masekondi?
Ndozvandinoshamisika ... Ndeupi musiyano uripo pakati peshinda refu yekumanikidza uye kumanikidza? Zvave zvakafanana, zvirinani kuti ndozvazvinoita. Shanduko ... HAPANA. Ini ndinofunga zvakafanana, asi zvakanyanya posh uye zvinodhura kuita sechinhu chinoshanduka kana zvisiri.
Ndatenda kwazvo Luis!. Ini ndaifarira tsananguro nekuti mumaminetsi gumi nemashanu unoona zvese uye zvinobatsira kwazvo.
Vanhu, iyi haisi bhuru.
Iyo yekubata ye3d haina chekuita nekudzvanya iyo skrini kwemasekondi mashoma.
Hazvina kufanana nekuti, kana vakaita zvekupedzisira, iyo iPhone inofunga kuti iwe unoda kudzima kana kufambisa chikumbiro. Pane kupokana, kana iwe ukadhinda "zvishoma, iro basa idzva rinoratidzwa.
Izvo hazvina chekuita nemumwe. Usavhiringidze !!!
Vashanu Apple TV 4 vhidhiyo ongororo